‘माया पिरिम’ को ‘फोटो खिचेर’ गीत कति रुचाइयो ? « THULOPARDA.COM
‘माया पिरिम’ को ‘फोटो खिचेर’ गीत कति रुचाइयो ?
संगीतकार हुँदै अभिनयको बाटो रोजेका कोशिश क्षेत्रीको प्रमुख भूमिका रहेको चलचित्र ‘माया पिरिम’ यही मंसिर २० गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ । टेक पौरखी राई निर्देशित चलचित्रको एक हप्ता अगाडि ‘फोटो खिचेर’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको थियो । यो गीत अहिले चर्चामा छ । लेखु सहयात्री र विन्दु परियारको स्वरमा रहेको गीतलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् ।
अहिलेसम्म गीतमाथि झण्डै ७ लाखको नजर परिसकेको छ । १२ हजार लाइक्स मिलेको गीत हेरेर साढे ३ सय बढीले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएका छन् । कमेन्टमा अधिकांशले गीतको तारिफमा शब्द खर्चिएका छन् । कोशिश क्षेत्रीको संगीत र लेखु सहयात्रीको शब्द रहेको गीतमा ठुम्का लगाएका अभिनेता सलोन बस्नेत र मोडल अञ्जली अधिकारीको जोडीलाई पनि निकै रुचाइएको छ ।
गीतले चलचित्रको हाइप निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा निर्देशक राईले खुसी व्यक्त गरे । गीतका कारण दर्शकमा फिल्मप्रति कौतुहलता बढेको उनको ठम्याइ छ । चलचित्रमा कोशिश क्षेत्री, सलोन बस्नेत, किरण चन्द, अन्जली अधिकारी, विशाल पहारी, जयनन्द लामा, अर्जुन गुरुङलगायतको अभिनय छ । चलचित्रको कथा सविन अधिकारीले लेखेका हुन् ।
सागर बस्नेत र कोषराज दाहाल कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्म ‘माया पिरिम’ को सह-निर्मातामा मोहन मरासैनी र युवराज दाहाल रहेका छन् । प्रविन थापा र सविन अधिकारी चलचित्रका निर्माता हुन् । यो चलचित्रलाई निरज कँडेलले खिचेका हुन् । चलचित्रमा श्री श्रेष्ठको द्वन्द्व छ । निर्देशक राईले चलचित्र राम्रो बनेको बताउँदै दर्शकलाई एकपटक हेरिदिन आग्रह गरेका छन् ।